Hell - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > helo
Ny helo dia ny fisarahana sy ny fisarahana amin’Andriamanitra izay nofidin’ny mpanota tsy azo ovana. Ao amin’ny Testamenta Vaovao, ny helo dia ilazana an-tsary hoe “dobo afo”, “maizina” ary Gehena (taorian’ny lohasahan’i Hinoma akaikin’i Jerosalema, toerana fandoroana fako). Ny helo dia lazaina fa sazy, fijaliana, fampijaliana, faharavana mandrakizay, fidradradradrana ary fikitroha-nify. Sheol sy Hades, teny roa avy amin’ny fiteny tany am-boalohany ao amin’ny Baiboly nadika matetika hoe “helo” sy “fasana”, dia manondro ny fanjakan’ny maty. Mampianatra ny Baiboly fa hiharan’ny fahafatesana faharoa ao amin’ny farihy afo ny mpanota tsy mibebaka, nefa tsy mazava tsara raha midika ho fandringanana izany na ho tafasaraka ara-panahy amin’Andriamanitra. (2. Thessalonians 1,8-9; Matthew 10,28; 25,41.46; Apokalypsy 20,14:15-2; 1,8; Matio 13,42; Salamo 49,14-15)
“Raha ny tananao ankavanana no manimba anao, tapaho izy, ka ario ho afaka aminao; Tsara ho anao raha very ny iray momba ny tenanao, fa tsy ny tenanao manontolo no ho any amin’ny helo.” (Mat 5,30). Ny helo dia zavatra tena matotra. Tsy maintsy raisina ho zava-dehibe ny fampitandreman’i Jesosy.
Ny zavatra inoanay dia mamaritra ny helo ho "Fisarahana sy fisarahana amin'Andriamanitra izay nofidin'ny mpanota tsy mety diso". Tsy hazavainay fa ny fisarahana sy ny fampisarahana izao dia midika hoe fijaliana mandrakizay na fahatsiarovan-tena tanteraka. Lazaintsika tokoa fa tsy manazava izany mazava ny Baiboly.
Rehefa tonga any amin'ny helo izy io, toy ny olana maro hafa dia tsy maintsy mihaino an'i Jesosy isika. Raha raisintsika ho zava-dehibe amin'i Jesôsy rehefa mampianatra momba ny fahasoavana sy ny famindram-po izy, dia tokony hojerentsika koa izy rehefa miresaka momba ny sazy. Na izany aza, ny famindram-po dia tsy midika hoe be loatra raha tsy voavonjy zavatra iray isika.
Nampitandrina i Jesosy tao amin’ny fanoharana iray fa hatsipy ao anaty lafaoro misy afo mirehitra ny ratsy fanahy3,50). Ao amin’io fanoharana io dia tsy resaka fandoroana fandoroana no noresahiny fa “fidradradradra sy fitrotroana”. Ao amin’ny fanoharana iray hafa, Jesosy dia mamaritra ny famaizana ny mpanompo izay nahazo famelan-keloka, izay tsy namela ny mpanompo namany, ho toy ny “fampijaliana” (Matio 1.8,34). Ny fanoharana iray hafa dia milazalaza ny olona ratsy fanahy iray izay voafatotra sy natsipy “ho amin’ny maizina” (Matio 2 Kor.2,13). Io haizina io dia lazaina ho toerana fitomaniana sy fikitroha-nify.
Tsy manazava i Jesosy raha iharan'ny fanaintainana na alahelo ny olona ao anaty maizina, ary tsy manazava izy raha mandoka ny nifiny amin'ny fibebahana na hatezerana. Tsy izany no tanjona. Raha ny marina, tsy dia mitantara ny hiafaran'ireo lehilahy ratsy fanahy izy.
Nampitandrina ny olona tamin’ny fomba mazava anefa i Jesosy mba tsy hifikitra amin’izay mety hatsipy any amin’ny afo mandrakizay. “Fa raha ny tananao na ny tongotrao no manafintohina anao, dia tapaho izy ka ario”, hoy ny fampitandreman’i Jesosy. " Aleo ho velona kilemaina na kilemaina noho ny manana tanana roa na tongotra roa, nefa hariana any amin'ny afo maharitra mandrakizay" (Matio 1.8,7-8e). Aleo mandà ny tenanao amin’izao fiainana izao toy izay “hatsipy any amin’ny afobe” (and. 9).
Moa ve hosazina mandrakizay ny ratsy fanahy? Ny Baiboly dia azo adika amin'ny fomba maro samihafa momba an'io. Ny andininy sasany dia manome sazy mandrakizay, fa ny hafa kosa manome sara voafetra. Fa na izany na tsy izany dia tokony hohalavirina ny afobe.
Mampatsiahy ahy ny boky InterVarsity Press momba an'io lohahevitra io, Fahitana roa momba ny helo. Edward Fudge dia miady hevitra ny amin'ny famongorana; Robert Peterson dia miady hevitra momba ny fijaliana mandrakizay. Eo amin'ny fonon'ity boky ity misy lehilahy roa, samy manana ny tanany eo alohany
ny loha amin'ny fanehoana tahotra na horohoro. Ny grika dia natao hanehoana an'izany
na dia misy fomba fijery roa momba ny helo aza dia tsy mampiharihary na inona na inona mahita ny afobe ianao. Mpamindra fo Andriamanitra, fa izay manohitra an’Andriamanitra dia mandà ny famindram-pony ary avy eo dia mijaly.
Taratasin'ny Testamenta Vaovao
Nampiasa sary isan-karazany i Jesosy mba hanasaziana ireo mandà ny famindram-pon'Andriamanitra: afo, maizina, fahantrana ary fandringanana.
Niresaka momba ny fitsarana sy ny fanasaziana koa ny apostoly, nefa samy hafa ny fomba nilazany izany. Hoy i Paoly: “Ny tsy rariny sy ny fahatezerana; Fahoriana sy tahotra no ho amin’ny fanahin’ny olona rehetra izay manao ratsy, voalohany amin’ny Jiosy, dia amin’ny Grika koa” (Romana). 2,8- iray).
Nanoratra toy izao momba ireo izay nanenjika ny Eglizy tany Tesalonika i Paoly: “Hiharan’ny famaizana izy ireo, dia fahaverezana mandrakizay amin’ny tavan’ny Tompo sy amin’ny herin’ny voninahiny.” (2. Thessalonians 1,9). Noho izany, ao amin'ny finoantsika dia mamaritra ny helo ho "fisarahana sy fanalavirana an'Andriamanitra".
Fahafatesana no sazin’ny Testamenta Taloha noho ny nandavany ny Lalàn’i Mosesy, fa izay mandà an’i Jesosy amim-pisainana kosa dia mendrika sazy lehibe kokoa, hoy ny Hebreo. 10,2829: “Mahatahotra ny ho azon’ny tanan’Andriamanitra velona” (and. 31). Andriamanitra be famindram-po tsy takatry ny saina, fa rehefa mandà ny famindram-pony ny olona iray, dia ny fitsarana ihany no mitoetra. Tsy tian'Andriamanitra hisy hijaly amin'ny horohoron'ny helo - tiany ho tonga amin'ny fibebahana sy ny famonjena ny olona rehetra (2. Petrus 2,9). Fa izay mandà izany fahasoavana mahagaga izany dia hijaly. Izany no fanapahan-kevitrao fa tsy an’Andriamanitra. Noho izany, ny finoantsika dia milaza fa ny helo dia "nofidin'ny mpanota tsy mety levona". Izany no ampahany manan-danja amin'ny sary.
Ny fandresen’Andriamanitra farany dia ampahany lehibe amin’ilay sary koa. Ny zavatra rehetra dia hofehezin'i Kristy fa efa nanavotra ny zavaboary rehetra Izy (1. Korintiana 15,20-24; Kolosiana 1,20). Halamina ny zava-drehetra. Na ny fahafatesana sy ny fanjakan’ny maty aza dia ho rava amin’ny farany ( Apokalypsy 20,14 ). Tsy milaza amintsika ny fomba hifandraisan'ny Helo amin'io sary io ny Baiboly, ary tsy milaza ho mahalala isika. Matoky fotsiny isika fa Andriamanitra, izay feno fahamarinana sy famindram-po, dia hitondra izany rehetra izany ho amin’ny famaranana mahomby amin’ny fomba tsara indrindra.
Ny fahamarinana sy ny famindrampon'Andriamanitra
Ny andriamanitra feno fitiavana dia tsy hampijaly ny olona mandrakizay, hoy ny sasany. Ny Baiboly dia manambara Andriamanitra iray izay mangoraka. Fa kosa hanafaka ny olona amin'ny fahoriany fa tsy hampijaly azy ireo mandrakizay. Ny foto-pinoana taloha momba ny helo manasazy mandrakizay, maro ny mino, dia manambara an'Andriamanitra ho sadista mpamaly faty, ka manome ohatra mahatsiravina. Fanampin'izany, tsy mety raha manasa olona mandrakizay mandritra ny taona vitsivitsy na folo taona monja.
Saingy mahatsiravina tokoa ny fikomiana amin'Andriamanitra. Tsy haintsika ny mandrefy ny faharatsiana amin'ny fotoana ilana hanaovana azy, hoy ny fanazavan'izy ireo. Mety maharitra minitra vitsivitsy fotsiny ny famonoana olona, ​​fa mety haharitra am-polony na taonjato maro ny fametahana azy. Ny fikomiana amin'Andriamanitra dia fahotana lehibe indrindra eo amin'izao rehetra izao, hoy ny nambaran'izy ireo, ka mendrika ny sazy mafy indrindra izany.
Ny olana dia tsy azon’ny olona tsara ny rariny sy ny famindram-po. Tsy mahafeno fepetra hitsara ny olona - fa i Jesoa Kristy. Hitsara izao tontolo izao amin’ny fahamarinana Izy (Sal 9,8; John 5,22; Romana 2,6-11). Afaka matoky ny didim-pitsarany isika, satria fantatsika fa sady marina izy no hamindra fo.
Rehefa atsangana ny lohahevitra momba ny helo dia misy ny ampahany amin'ny Baiboly toa manindry ny fanaintainana sy ny fanasaziana, ary ny hafa kosa mampiasa ny sarin'ny fandringanana sy ny fiafarany. Raha tokony hiezaka ny hampihavana ny famaritana iray isika dia aleo samy miteny. Rehefa mikasika ny helo dia tsy maintsy matoky an'Andriamanitra isika, fa tsy ny saintsika.
Amin’izay rehetra nolazain’i Jesosy momba ny Helo, ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe Jesosy no vahaolana amin’ilay olana. Tsy misy fanamelohana ao aminy (Romana 8,1). Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana mandrakizay.